युभेन्टसले सम्मानस्वरुप रोनाल्डोको तलबमा वृद्धि गर्ने !
नारी दिवसमा १३ जना फ्रन्टलाइनर महिला सम्मानित
प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्–मुद्दा हारे पनि अदालतका सबै फैसला कार्यान्वयन गर्छु
सिचाइँ नहुने जग्गामा जडिबुटी उत्पादन गरिन्छ : वनमन्त्री आले
लापोर्टा दोस्रो पटक बार्सिलोनाको अध्यक्षमा निर्वाचित
सर्वाेच्चको फैसलापछि विराटनगरमा ब्युँताइयो एमालेको पार्टी कार्यालय
मैले देखेका र भोगेका ती दिनहरू !
हेमोग्लोबिन कम भएका व्यक्तिका लागि चिया हानिकारक (भिडियो रिपोर्ट)
सर्वाेच्चको फैसलापछि प्रदेशमा मुख्यमन्त्री झन् शक्तिशाली !
२० झोलुङ्गे पुलले जोडिएको बागलुङ–पर्वतको बहुआयामिक सम्बन्ध
आज मौसम बदली भई वर्षा र हिमपातको सम्भावना
मुख्य पृष्ठखेलकुद फुटबलयुभेन्टसले सम्मानस्वरुप रोनाल्डोको तलबमा वृद्धि गर्ने !
बिहीबार, १७ पुस, २०७६ 0प्रतिक्रिया
एजेन्सी, १७ पुस । इटालियन क्लब युभेन्टसले आफ्ना स्टार फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोसँग नयाँ सम्झौता गर्ने तयारी थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका अनुसार युभेन्टसले रोनाल्डोका कारण आफ्नो आम्दानीमा भएको वृद्धिका कारण उनको तलबमा वृद्धि गर्दै नयाँ सम्झौता गर्न लागेको हो ।
इटालियन मिडिया कोरेर्रे डेल्लो स्पोर्ट्सका अनुसार रोनाल्डोको तलबमा वार्षिक ४२ मिलियन हुनेगरी युभेन्टसले नयाँ सम्झौताको तयारी गरेको हो । ३४ वर्षीय रोनाल्डोको सम्मानमा उसले रकम थपेर साढे ३ वर्ष सम्झौता थप्ने तयारी गरेको रोनाल्डोका एजेन्ड जर्ज मेन्डेसलाई उदृत गर्दै डेल्लो स्पोर्ट्सले समाचार सम्प्रेषण गरेको छ ।
पार्चुगिज स्ट्राइकर रोनाल्डोसँगको युभेन्टसको सम्झौता २०२२ मा सकिनेछ । तर, २०१९ व्यक्तिगत रूपमा ‘खराब’ भएको भन्दै रोनाल्डोले पूर्वक्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड फर्किने मनसाय बनाएको चर्चा चलेको थियो । यसै चर्चाका बीच युभेन्टसले रोनाल्डोलाई क्लबमै राख्ने उद्देश्यले उनीसँगको सम्झौता निर्धारित समयअगावै लम्ब्याउने भएको हो ।
खबरका अनुसार युभेन्टसले अब आगामी २ महिनाभित्र रोनाल्डोसँग ३८ वर्षको उमेरसम्मका लागि सम्झौता गर्ने भएको छ । रोनाल्डो आउँदो फेब्रुअरी महिनादेखि ३५ वर्ष पूरा हुँदैछन् । हाल रोनाल्डोले वार्षिक ३० मिलियन युरो तलबबापत थाप्छन् । त्यसबाहेक उनलाई बोनस रकम पनि अलग्गै दिइन्छ ।
यदि, युभेन्टसले रोनाल्डोको तलबमा वृद्धि गर्दै सम्झौता गरेमा उनी सर्वाधिक कमाउने खेलाडी बन्नेछन् । उनले स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेस्सीभन्दा बढी कमाइ गर्नेछन् ।
क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन ‘हाम्रो रङ्गशाला, मेरो कुर्ची’ अभियान
बेल र केनको दुई–दुई गोल, टोटनह्यामको सहज जित
सिरी ‘ए’को उपाधि होडमा इन्टरको पछि–पछि मिलान